Imihlahlandlela Yabafuna Imisebenzi | Imisebenzi - Umsebenzi - Ukuhamba Dubai, United Arab Emirates
Izikhombandlela zabafuna uJobe
I-Dubai, Indawo Eyinkimbinkimbi Yokubhekana Nayo Okungenani Kanye Ekuphileni Isikhathi
Izikhombisi Zabantu Abafuna Umsebenzi KaJobe Ngaphansi Kwezindawo Ezinhle ZemiSebenzi Emisebenzi e Dubai, e-UAE
Imihlahlandlela ye abafuna umsebenzi e-United Arab Emirates. Ukufuna umsebenzi owuthandayo eDubai akaze kube umsebenzi olula kulabo abasha kuleli. Amasiko abasebenzi kanye abaqashi bahluke kakhulu ngokuqhathaniswa namazwe esingengawo.
IDubai yidolobha elikhula ngokushesha kakhulu futhi lifune abantu abafuna umsebenzi kumele badonse amasokisi abo uma bafuna ukuncintisana izinkulungwane zabancintisana. Engikubonile ngesikhathi sokubuka kuqalelwa kabusha kwabafuna umsebenzi abasha sebemukele iphethini yakudala yokuqalwa lapho umqashi ofaka isicelo esingaphansi angaya khona, ngaphandle kwalokho, angizizwa abaqashi kuzosebenzisa isikhathi sabo ekuqhubekeni nokudla okuphelelwe yisikhathi futhi okungafanele.
Iningi labo abafuna umsebenzi lalihlala livamile phindela futhi unamathisele okufanayo kunoma yimuphi umsebenzi nomaphi lapho bethola noma yisiphi isikhundla, ngisho iningi lesikhundla liphikisana ngokuphelele nabo iziqu kanye nokuhlangenwe nakho okuhle.
Umuntu akakwazi ukuphoqa a ofuna umsebenzi wokwamukela okuhlangenwe nakho kwakhe neziphakamiso, kepha yena angathola iziphakamiso ezithile ezinezithelo ezizwakalayo.
Ukuba ngumphathi wezinsizakusebenza futhi ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwami ​​kwangaphambilini ngizojabula ukwabelana ngesiphakamiso sami nalabo abafuna umsebenzi, futhi ngiyathemba ukuthi kuzobasiza ukuthi basondele kubaqashi.
Izikhombisi Zokufuna Abaqashi E-Dubai
Ukuhlaziywa komuntu siqu:
Hlela okuhlangenwe nakho kwakho kwangaphambilini futhi iziqu njengesisekelo futhi bahumushe ngokuphelele ubuntu bakho futhi chaza izinhloso zakho zomsebenzi, ukuthi lapho ufuna ukuzibona khona ngemuva kweminyaka eyi-10. Noma uthatha qala njengomthengisi kufanele ubheke phambili ekuzilindeleleni oyiNhloko yokuthengisa enkampanini enhle. Yilabo bantu kuphela abangathola izizinda zabo ezinhle kakhulu zomsebenzi uma benenhloso ebekiwe yomsebenzi.
Ukukhethwa kwemisebenzi yomsebenzi:
Gcina ukubeka phambili imboni yakho yokufuna umsebenzi, ngaso sonke isikhathi funa umsebenzi embonini lapho ufuna ukwakha khona ikusasa lakho kuyo. ukwaneliseka komsebenzi kubaluleke kakhulu uma umuntu efuna ikusasa eliqhakazile. Umuntu angaba nomyalo phezu komsebenzi lapho / yena ihlangabezana nokwaneliseka komsebenzi.
Hlangana njalo ongoti bomsebenzi kubangani bakho nemindeni yakho bese uthole imibono yabo yochwepheshe. Qhubeka uhlaziye amagilebhisi akho futhi gcwalisa izikhala ngemiyalo eqotho yeseluleko.
Landa i-Kingston Stanley Salary Survey 2019
Landa i-Kingston Stanley Salary Survey 2019Thwebula
Ukuphathwa kwesikhathi sesikhathi somsebenzi:
Hlala endaweni ephonsa iphini uthule unikeze Ukunakwa ne-100% nokunakwa ngaphambi kokufaka isicelo somsebenzi. Akukaze kuthande ukulahla uhlelo lokusebenza ku-inthanethi nomsebenzi osetshenzisiwe kuzanga izinyawo zakho. Umuntu angafakwa ohlwini olufushane kuphela noma ukubizelwa inhlolokhono uma eqonda izidingo zomqashi futhi ezisebenza ngendlela efanele.
Umsebenzi wansuku zonke wokusebenzisa umsebenzi:
Setha umkhawulo oqondile wokufakwa kwezicelo zomsebenzi kwansuku zonke, bengizokwenza mathupha phakamisa futhi uncome ukuthi ukufaka isicelo semisebenzi ehlobene ne-10 zingcono kakhulu kunokufaka isicelo esilula se-100 ezingasebenzi futhi ngaphandle kokuthola imfuneko yemisebenzi kumaphethelo womsebenzi wewebhu. Ngifakazile iningi labantu abafuna umsebenzi lifaka isicelo semisebenzi elula online.
Izicelo zomsebenzi ku-intanethi:
Ngaphandle kwesikhathi ukonga ngenkathi ufaka isicelo somsebenzi kuba nzima kakhulu kulezi zinsuku ukufakwa kuhlu phakathi kwamakhulu abafake izicelo zemisebenzi embalwa ekhangisiwe. Iningi lezizukulwane ezisencane futhi abafuna umsebenzi abasha bathembela kuphela kuma-webhusayithi aku-inthanethi. Ngingakusikisela mathupha ukuzingela izimboni lapho zikhona unentshisekelo yokuthola umsebenzi futhi uthole izikhundla ezingenamuntu kuwebhusayithi yabo. Ukufaka isicelo kuwebhusayithi yabo kungcono kakhulu ngokuqhathanisa inthanethi.
Faka isicelo njalo ngencwadi ebanzi ezahlukahlukene kunoma yimuphi umsebenzi futhi uthembeke kuwe lokho ungumuntu ofanele kwesikhundla esidingekayo.
Ukuhlaziywa kwefomu lokuphendula abaqashi:
Uma ngenhlanhla, ofaka isicelo uthola impendulo kumqashi ukwenqaba isicelo sakhe ngezizathu ezizwakalayo, Kufanele afeze izikhala uma zikhona.
Ngaphandle kwe izikhala zomsebenzi abafuna umsebenzi, Nginokugxekwa okwakhayo ezisekelweni zemisebenzi eziku-inthanethi nabaqashi bezinkampani ezahlukene ezisebenza ekubhukeni okungaphansi enginakho.
Izingosi zomsebenzi ku-intanethi:
Angikaze ngibe semkhuhlane wokulula inqubo yokufaka isicelo semisebenzi, futhi yemukela amakhulukhulu ezicelo ezingafuneki nezingalungile, lapho isicelo esifanelekile kwesinye isikhathi singaze sibuyekezwe. Ngingasho ukuthi kufanele kube khona inqubo yangaphambi kokuxoxisana noma imisebenzi ehlobene imibuzo futhi lokho kuzobamba kuphela abafakizicelo bangempela nabafanele.
Kuyafana nangaphambi kokufaka isicelo “kwesihlungi sezidingo” somsebenzi okuzokwenziwa, lapho ofuna umsebenzi ohlakaniphile futhi ongokoqobo azofaka isicelo somsebenzi kuphela lapho ezizwa eyilungela yena. Okwesibili abafakizicelo abanentshisekelo nabangempela banika isikhathi izingxoxo zangaphambi kokuba kwenziwe.
Chofoza Ngezansi Ngama-Portals Aphezulu Emisebenzi e-Dubai, e-UAE
Ayikho impendulo evela kubaqashi nabaqashi:
Kulezi zinsuku engikuqaphelile kakhulu yezinkampani zabaqashi nezabaqashi phendula kuphela nge-imeyili eyodwa evamile ye-AUTO "ngiyabonga ngohlelo lwakho lokusebenza, sizobuyekeza uhlelo lwakho lokusebenza futhi sizobuyela kuwe", kepha ababuyi. Ukungasebenzi emsebenzi esikhathini esidlule ngaba nalokhu okuhlangenwe nakho ukuthi ngafaka isicelo semisebenzi efanelekile, kepha angikaze ngithole umyalezo owodwa ovela abaqashi ngesizathu esizwakalayo isicelo sami senqatshiwe.
Kukuzithoba kwami isicelo kubo bonke abaqashi ukubuyisa umenzi wesicelo ngomusho owodwa owodwa onesizathu esizwakalayo sesicelo sakhe senqatshiwe, Isizathu sakho esiqotho ukwenqaba ukukhuthaza umenzi wesicelo ngezindlela ezimbili, okungukuthi i-One (1) umfakisicelo akasoze azwelana nesikhathi asisebenzisa ngenkathi efaka isicelo kanti okwesibili ofaka isicelo uzothola ithuba lokwakha amandla akhe lapho kudingeka khona.
Nginombuzo owodwa futhi ngingabonga kakhulu uma ngithola impendulo yawo “Izinxephezelo nezinzuzo zikhona kususelwa kubuchwephesha bobufakisicelo umnikazi noma umane wakhe Ubuzwe bubalulekile?"
I-Dubai City Inkampani manje inikeza iziqondiso ezinhle zeMisebenzi e-Dubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolimi lwakho.